Umlayezo Wokugubha Usuku Lwentsha – Zululand District Municipality
Lolusuku lo mhlaka 16 June lukhulu ezinhliziyweni zabantu base Ningizimu Africa ngoba luyusuku lwesikhumbuzo lapha sisuka khona ngezikhathi zobumnyama kulelizwe.
Kodwa Uma uzokhuluma ngalo ungakhulumi ngentsha ufana nomuntu osuzela emanzini ngoba umsuka nengqikithi yalo isentsheni yalelizwe eyalwa ilwela ukuba izimpilo zabantu ikakhulukazi abasha balelizwe ibengcono.
Nathi siwumkhandlu waseZululand District Municipality siyafisa ukuba lolusuku singalugubhi nje kuphela ngomlomo futhi lungabi ngalolusuku kuphela kepha lube nsukuzonke kubantu bonke ngezikhathi zonke ngokuthi silalele imibono yentsha, siyikhulise lembono ibe yizinto eyothi uma intsha ibuka emuva iziqhenye nge Zululand.
Into enkulu nisifisa ukuqinisekisa ngayo ukuthi intsha ayivaleleki amathuba ikakhulukazi okuzithuthukisa kwezomnotho ikakhulukazi Agriculture, Tourism, Arts and crafts, Technology neminye imixha engafukula intsha yethu. Sifisake ukuthi sithi silukhumbula lolusuku sibe lokhu sikubekile emiqondweni yethu njengephupho okufanele silifeze maduzane. Siyabonga nina Bendlovu!
Amakhosi aseZululand abuyelwe isithunzi ngokuthola amakhadi e Medical Aid enikwa uMeya uThulasizwe Buthelezi egameni likaMasipala. Ngaloluhlelo amakhosi asezokwazi ukuthola ukunakekelwa okufanele isithunzi sawo ngakwezempilo. Halala…